ARY RAHA MANJAVOZAVO NY HOAVY ? - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
ARY RAHA MANJAVOZAVO NY HOAVY ?
P.Prospère il y a 9 mois
Efa eo andalam-pandinihana ny famerenana amin'ny laoniny ny fiainan'ny Gazety Lakroan'i Madagasikara isika izao. Ho avy tsy ho ela izany ny fotoana afahantsika mifandray. Izahay mampita ny vaovao avy aminareo ary ianareo miara-manabe ny mpakamy aminay. Samia ho tahin'Andriamanitra isika rehetra.
Te ho be fanantenana ihany ny tena rehefa mijery ireo fihetsiketsehana sy fanehoan’ny haino aman-jery samihafa azy, saingy rehefa tojo ny zava-misy iainan’ny mpiray tanindrazana maro dia velon’ahiahy ary malahelo. Misy faritra, misy olona, misy asa tena hadino. Toa honjohonjony irery ny zava-misy sy ny fiainana. Iza no mba antenainy ? Ho azy ireny, inona no atao hoe fanjakana ? Misy ve izany fitondrana izany ?
Ao Vakinankaratra ao. Tsy dia lavitra ny renivohitra, toerana nanana ny tantarany tamin’ny tolom-panafahana iny faritra andrefan’Ankaratra iny ary Ramainandro no ivony ; saingy rehefa miditra ao an-kibon’izany faritra izany dia mahita fa tsy misy mpitondra mijery na mba manopy maso akory. Faratsiho, lavitra sady tsy misento aminy. Soavinandriana, te ho renivohitra ho azy samirery. Arivonimamo, tsy manana ny lanjany toy ny fahiny. Ambohibary, lalam-pirenena fa afo lavitra tsy azo amindroana. Dia nihiboka anatiny ao ilay faritra andrefan’Ankaratra. Tsy lalana, tsy toe-tany, tsy fifandraisana, tsy sekoly, tsy toeram-pitsaboana fa dia an-tongotra an-kilometatra maro vao mba mahita izay tena ilaina. Manavatsava tanety ngazana sy mihoatra tendrombohitra mampiverin-dalana ny amboa. Nofinofy izany jiro izany ! Tsy azo an-tsaina izany lalana hampandroso izany ! Izay mba te hiova dia mandositra lavitra ary tsy te hiverina any. Ho any an-davaka ve, hoy ny sasany ?
Rehefa mijery ny tanety sy ny vohitra maro dia mahita fa ringitra ny ala ary mangadihady. « Folo taona lasa izay, ala no teo, saingy io hitanareo io ankehitriny, na ny hataina aza tsy misy! ». Manomboka misikotra ny fakankazo sisa tavela handrahoana sakafo. Mahantra koa ny tany ary mitrongy ny manodidina azy ny olona mba ho velona. Tsy mba ren’ny sofina any izany fiarovana ny tontolo iainana izany, fa majifa izay sendra ny tanan-dRaolombelona.
Sarintsarin’ny faritra maro tsy misy mpijery ary tsy hitan’ny fanjakana Ramainandro sy ny manodidina azy. Tsy mahagaga satria ireo mpitondra antsika dia nisidina ambony loatra ka varivarian’ny lavitra. Misy minisitra vao nafarana toa tsy mahalala akory, na ny asany, na ny olony, na ny ataony. Na ny fireneny aza zara raha nodiaviny. Manam-pahefana fotsiny ka dia mpampihatra fahefana. Te handany vola fotsiny, fa tsy mahalala akory ny miditra sy ny ho tantanina. Te hiteny amin’ny filoha fa miasa, saingy mampidi-kizo ny mpiara-miasa sy ny orinasany. Misy minisitra tsy amin’ny toerany ka sady tsy fahaiza-manao no tsy fahaiza-miara-miasa. Mampitaraina ireo tekinisianina tena tompon’antoka amin’ny hevitra an-taingina arosony. Eo amin’ny antanantohatra voalohany dia efa sahirana ny fitondrana mamaritra ny fahombiazany. Mety fitondrana hampidi-trosa ny firenena aza no ateraky ny fotodrafitrasa mety zary fandaniana nefa tsy hamokatra. Fotoana tokony hanaovana jery tombana izao, fa ampy izay ny fihetsiketsehana sy ny safosiaka mampandry adrisa. Mila izany ny governemanta sy ny forongony.
Fa ny tena mila izany ankehitriny dia ny firenena sy ny mpiray tanindrazana. Ny tena mila izany dia ireo faritra tsy nandalovana mpitondra na fony fampielezan-kevitra na efa eo amin’ny fitondrana. Ny tena mila izany dia ireo olona any an-tampon-tanety tsy manana ravin-kazo hialofana akory. Fa ny tena mila izany dia ireo mpitondra tsy mahalala afa-tsy ny tenany sy ny ankohonany… Mila izany ny firenena manontolo mba tsy hisian’ny zanak’Ikalahafa !